UPVC manda tontonana T1110 - China Hubei Shengyu fitaovam-panorenana
Shengyu UPVC rindrina panelt dia safidy vaovao ho an'ny fanorenana cladding rindrina. No vokarina ny 3 sosona mpiara-extrusion teknolojia. Tena mafy, mateza ny lokony sy maivana, tsara kokoa noho ny vy sy ny tafo taratasy. Zava-dehibe kokoa, dia tsy harafesina amin'ny orinasa mavesatra zaridaina. Ny rindrina UPVC tontonana dia mahatohitra ny amine, holatra sy ny hamandoana amin'ny kalitao ambony. Tsy mbola ara-batana miovaova amin'ny fanatanterahana ny -40ºC ny 80ºC. Ny anti-harafesiny fanatanterahana UPVC rindrina tontonana dia mety ho tena applic ...
FOB Price: 2.99-7.99 / metatra toradroa
Shengyu UPVC rindrina panelt dia safidy vaovao ho an'ny fanorenana cladding rindrina. No vokarina ny 3 sosona mpiara-extrusion teknolojia. Tena mafy, mateza ny lokony sy maivana, tsara kokoa noho ny vy sy ny tafo taratasy. Zava-dehibe kokoa, dia tsy harafesina amin'ny orinasa mavesatra zaridaina.
Ny rindrina UPVC tontonana dia mahatohitra ny amine, holatra sy ny hamandoana amin'ny kalitao ambony. Tsy mbola ara-batana miovaova amin'ny fanatanterahana ny -40ºC ny 80ºC.
Ny anti-harafesiny fanatanterahana UPVC rindrina tontonana dia mety ho fampiharana indrindra ao amin'ny faritra amoron-tsiraka amin'ny sira mafy harafesiny zavona, ary ny faritra amin'ny henjana ny fahalotoan'ny rivotra, indrindra fa ao amin'ny faritra indostria simika.
1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm 1110mm 1050mm 800mm Araka ny Required 3.2-6.0KG / ㎡ malamalama White, Blue
Previous: ASA UPVC mitafo fanitso tafo taratasy W1025
Next: FRP daylighting taratasy TT980
Fibre Roof Panels
Fiberglass entona Panels
Fiberglass Light Panels
Fiberglass Plastic Panels
Voaro Frp Panels
Frp Panels For Sale
Glass Roof Panels Prices
entona Plastic Panels
entona Roof Panels
Voaro Roof Panels
manjavozavo Fiberglass Panels
Translucent mitafo fanitso Roof Panels
Translucent Fiberglass tafo Panels
Mangarahara Fiberglass Roofing Panels
Mangarahara Roof Panels
Synthetic ASA resin tafo taratasy RY720-A